ရထားမတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့်ခြေလက်အင်္ဂါသုံးခုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး အောက်ခြေကနေတက်လာတဲ့လခစားဝန်ထမ်း !!! - JAPO Japanese News
ရထားမတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့်ခြေလက်အင်္ဂါသုံးခုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး အောက်ခြေကနေတက်လာတဲ့လခစားဝန်ထမ်း !!!
သော 09 Oct 2020, 9:35 မနက်
အင်း . . . ငါတော့ ပြန်ပြီး နာလန်ထူနိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။
ဒီလို ခွန်အားမရှိတော့တဲ့အသံနဲ့ ပြောတဲ့သူ၊ ဂျပန်ရဲ့ နေရာတိုင်းမှာ ရှိပေမယ့် တကယ်လည်း ပြန်ပြီး ထူထောင်နိုင်ဖို့ဆိုတာက တကယ့်ကိုအောက်ခြေကနေပြန်စရမယ်လို့ပြောရင် “အဲလောက်အထိတောင်တော့ မဟုတ်ဘူးမလား ? “ လို့ တခြားသူတွေက တွေးရင်တွေးကြမှာပါ။
ဒီလိုပြဿနာက ဘယ်လောက်သေးငယ်တဲ့ အရာဖြစ်သလဲဆိုတာကို ခံစားရစေတဲ့သူများလည်းရှိပါတယ်။
အဲဒီလူကတော့ Mr. Chihiro Yamada ဆိုတဲ့သူပါ။
၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ရထားကြောင့် မတော်တဆမှုတစ်ခုကြုံခဲ့ရပြီး ခြေထောက်ရော လက်မောင်းနှစ်ဖက်စလုံးကို ရထားကြိတ်ခံရခြင်းကြောင့် ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ထိုအချိန်ကအသက် ၂၀ ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မစ္စတာ Yamada က ကေဘယ်လ်တီဗီကုမ္ပဏီအတွက်အရောင်းစာရေးအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေရတဲ့အချိန်ပါ။
မစ္စတာ Yamada ဟာ သောက်ပွဲကိုလည်း လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်စွာဖြင့် တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ငါအရက်တွေအများကြီးသောက်ပြီးရထားဘူတာသို့လာပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူအိပ်ပျော်သွားပြီး၊ဘူတာရုံပလက်ဖောင်းပေါ်မှာအိပ်နေတုန်း ရထားလမ်းလမ်းကြောင်းပေါ်မှာလဲကျသွားပါတယ်။
ထိုအခါ ရထားတစ်စီးရောက်လာပြီး ရထားကြိတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။
မစ္စတာ Yamadaအား မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ဆေးရုံသို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံရောက်တော့မှ နိူးလာတဲ့ Yamada တစ်ယောက် သူ့ရဲ့ မျက်လုံးကိုပွတ်သပ်ရန် ညာဖက်လက်ကိုရွှေ့ရန်ကြိုးစားသောအခါမလှုပ်ရှားနိုင်ပါ။လည်ပင်းကိုလှုပ်ရှားပြီး ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ညာဘက်လက်မရှိတော့ဘူးဆိုတာကို သိလိုက်ရပါတယ်။
ပထမတော့သူဟာ ဒါကို အိပ်မက်လို့ထင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆရာဝန်ရဲ့ရှင်းပြချက်ကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါ မတော်တဆမှုမှာ ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတာကို သိလိုက်ရတယ်။ဘဝက ပြီးပြီ လို့ ထင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
သူဟာညသန်းခေါင်အချိန်အိပ်ရာမှထပြီး အိမ်သာသွားတဲ့အခါ အကြိမ်ပေါင်းမနည်းပြင်းထန်တဲ့ နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ခြေလက်အင်္ဂါတွေက တစ်ခါတလေမှာ သင်ဆုံးရှုံးသွားတာကိုမေ့သွားပုံရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့်နေ့တိုင်း ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကျလာတယ်။သူဟာ နေ့တိုင်းလိုလိုသေချင်နေပြီး ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် သူကို လာသတ်စေချင်တယ်လို့တွေးနေခဲ့မိတယ်ဆိုပါတယ်။
ကယ်တင်ခံလိုက်ရတာကိုလည်း နောင်တရမိပြီး ဒီတိုင်းသေသွားတာကမှ ကောင်းဦးမယ်လို့တွေးမိတဲ့အထိပါပဲတဲ့။ဒီအပျက်သဘောဆောင်တဲ့အတွေးအခေါ်ကို ပြောင်းလဲရတဲ့အကြောင်းရင်းက သူ့ပတ်၀န်းကျင်ရှိလူတွေကို ငါဘယ်လိုဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာကိုခံစားခဲ့ရလို့ပဲတဲ့။
ဒီလို အခြေအနေမျိုး၌ရှိနေရသော်လည်း သူသည်သူ့ပတ် ၀န်းကျင်ရှိ လူများဟာ သူနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကို သူသဘောပေါက်ခဲ့ပြီး သူသည်သူ့ရဲ့ မူလတောက်ပသောအသွင်အပြင်သို့ ပြန်သွားရတော့မည်ဟုစတင်စဉ်းစားလာမိပါတယ်။သူ အထူးကြပ်မတ်ကုသမှုခန်းမမှာရှိနေတုန်းက သူ့အစ်ကိုက ငိုနေတဲ့မိဘတွေဘေးမှာဒီလိုပြောခဲ့တယ်။
“ ခြေလက်တွေပျောက်သွားပေမဲ့ ကယ်တင်ခံရတဲ့ဘဝက အလားကားဖြုန်းတီးစရာမဟုတ်ဘူး။ !!
ဤစကားလုံးက သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာစွဲသွားခဲ့ပါတယ်။အကယ်၍ ကျွန်ုပ်ပတ်၀န်းကျင်ရှိလူများက ကျွန်ုပ်နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိပါက ကျွန်ုပ်ပြန်လာရပါမယ်။ခြေလက်အင်္ဂါသုံးချောင်းသာပျောက်သွားတာပါ။ ကျန်တာ ငါမပြောင်းပါဘူး ဆိုတဲ့ ဒီအချက်ကိုစိတ်ထဲထားပြီး လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဆီကိုပြန်လှည့်ကာ လုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လုပ်နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်စတင်ကြိုးစားခဲ့တယ်။အသက် ၂၀ မှာမတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အသက် ၂၂ နှစ်မှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုပြန်ချင်လာတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းပြီးဆုံးသွားမလဲဆိုတာနှင့် သင့်အားတတ်နိုင်သမျှပြန်လည်အလုပ်ခန့်ရန် အရည်အချင်းပြည့်မှီလိမ့်မည်အထိတိုင်အောင် လုပ်ရမှာပါပဲ။စာရင်းကိုင်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာလက်မှတ်များ၊အရည်အချင်းများမှတစ်ဆင့် နောက်နှစ်အတွက် အလုပ်ရှာဖွေရေးစတင်ခဲ့ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ အရာများကိုပြန်လည်ရေတွက်လို့မရပေမယ့်လည်း
အကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားတွေက သူ့ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်ရဲ့ မြင့်မားသောနေရာများဖြစ်တဲ့ မီးသီးများအစားထိုးခြင်းကဲ့သို့သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခက်ခဲသောအရာများကိုပြုလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော်အရာရာကိုပြုလုပ်နိုင်ပုံရသည်။သန့်ရှင်းရေး၊ အဝတ်လျှော်၊ ချက်ပြုတ်။၎င်းသည်သာမန်လူများထက်ပိုကြာသော်လည်းသူကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်ပုံရပါတယ်။သူသည်အလုပ်တစ်ခုရပြီး အခုတစ်ယောက်တည်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
သင်ထင်ထားသော ခက်ခဲတဲ့ဘဝဆိုတာ ဒါကိုသိလိုက်ရရင် ရေတိမ်ပိုင်းလောက်ပဲ ဖြစ်မယ်မဟုတ်လား?ထိုကဲ့သို့သောအချိန်များမှာတောင် သူတို့ဘာသာသူတို့သွားလာရန် စီမံနိုင်သည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလူများရှိပါတယ်။
သင်လည်း ညည်းညူခြင်းမရှိဘဲ အကောင်းဆုံးကြိုးစားရအောင်နော် !
မိသားစု (၅)စု ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အမျိုးသားရဲ့ နောက်ကွယ်ကသရုပ်မှန် ?
ဒေသခံတွေရဲ့ ခြေလှမ်း၊ ရထားလမ်းတွေကိုကာကွယ်ပါ !!!!
သမာရိုးကျလမ်းစဉ်ကိုမလိုက်ပဲ တစ်မူထူးခြားတဲ့ပါရမီနဲ့ Tadao Ando ဗိသုကာပညာရှင်။
သုံးသပ်ဝေဖန်နိုင်မှုအတွက် ဦးနှောက်လေ့ကျင့်ခန်း !!!!!
လူသားမျိုးနွယ်သစ်လား? ရှူရှိုက်မှုတစ်ခုတည်းဖြင့် အသက်ဆက်ခြင်း။
ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုအရူးအမူးချစ်မိတာကြောင့် ဘဝပျက်သွားတဲ့ ဆာမူရိုင်း !!!!!
ဂျပန်လို “မိုး” ကို အမျိုးအစားခွဲထားတာ ၄၀၀ကျော်တောင်ရှိတယ် ! ?
(၁၈) ရက်နေ့၊ တစ်နိုင်ငံလုံးကူးစက်မှု ၄၈၉၂ ဦးရှိပြီး၊ သေဆုံးသူ ၅၅ ဦးရှိ
တိုက်ပွဲကနေပြန်ယူလာတဲ့ ရန်သူရဲ့ ဦးခေါင်းကို ဘာလုပ်ခဲ့ကြသလဲ ?!!!
Work frome home ရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို အမြန်ဆုံးသက်သာစေမယ့်နည်း !!!!
လံကွတ်တီနှင့်အမျိုးသားများ အေးခဲတဲ့ညမှာ ရေခဲရေဖြင့်သန့်စင်ခြင်း !!! ဟော့ကိုင်းဒိုးဓလေ့ရိုးရာ !!!